on April 08, 2006
မောင်လှ Apple G5 ကွန်ပျူတာကြီးနဲ့ OS X သုံးနေပြီလို့ မထင်စေချင်ပါ... မန္တလေးက ဘိုင်ကောင်လေး မောင်လှ တရုတ်ကထုတ်တဲ့ ကလုံးကွန်ပျူတာလေးတောင် အနိုင်အနိုင်သုံးနေရတာပါ... ခုဟာ ကိုညီလင်းဆက် မြန်မာပြည်ဖွားများ ဖိုရမ်မှာပေးထားတဲ့ FlyakiteOSX ပရိုဂရမ်လေးကို စမ်းသုံးထားတာပါ... စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်... Apple Mac OS X ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် စမ်းသုံးကြည့်ကြပါဦး...
အဲပဲလ် အိုအက်စ်အိပ်စ် ဗားရှင်းကို ၀င်းဒိုစ်း အိပ်စ်ပီပေါ်တွင် သုံးချင်သူများအတွက် အကောင်းဆုံး စစ်စတမ်သိမ်စ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုဒ် ၃၀ မက်ဂါဗိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲပဲလ်နှင့် တစ်ပုံစံတည်း တူပါတယ်။ သာမာန် သိမ်စ်းများနှင့် မတူပါ။ ပရိုဂရမ် တစ်ပုဒ်အနေဖြင့် တွိ လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်မရွေး ပြန်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ ဘာ အဲရာမှ မတွေ့ရပါဘူး။ သုံးခဲ့သမျှထဲမှာ စိတ်တိုင်းအကျဆုံး ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ စမ်းသုံးကြည့်ကြပါ။
Thank You Ko Maung Hla
I've used too many OSX Themes on Windows, never succeeded. Sometime it gave meabig crash with MS OS. This one is very nice, stable on my PC. Thank so much.
ကိုနေအောင် ကျေးဇူးတင်ရမှာ ကျတော့်ကို မဟုတ်ပါဘူး... ကိုညီလင်းဆက်ကိုပါ...
အဲဒါကို အန်အင်စတောလ် လုပ်ရင် ရှဲယာဒီအယ်လ်အယ်လ် ဖိုင်တွေကိုတော့ မဖျက်လိုက်ပါနဲ့။ ကျွန်တော့်မှာတော့ ပြသနာ လုံးဝမရှိပါ။ မာစတာလေး ဖျက်တာ ဒီအယ်လ်အယ်လ် ဖိုင်တချို့ ပါသွားလို့ ရီပဲလ်ယား လုပ်လိုက်ရတယ် ဆိုပါတယ်။ ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ သဘောပေါ့ဗျာ။